Henjan-droa ny tandy eo amin'ny filoha sy ny mpianatra
Nihamafy ny fitakiana, nitombo ny fanagatahana
Efa nakaton’ireo mpianatra nanomboka ny faha 4 aogositra ary nosokafana kely nony fifampiresahana tamin’ny filoha lefitry ny oniversiten’ny Toamasina ary naverina nafody indray izany ny faha 11 aogositra ka hatramin’izao, rehefa tsy nisy ny fanantsoana ireo mpianatra tamin’ny fifampiresahana.
Mbola tsy nahita-mbaha olana ny fitokonanana nataon’ireo mpianatra ao Barika dimy momban’ny fangatahana hijerena ny taratasim-panadinana nanaovan’izy ireo fanadinana 2em session. Ankilany, nitombo hatrany ny fangatahana ataon’izy ireo akoatry ny ny fiherena ny feuille de copie, toy fampidinana ny sarampianarana ary eo ihany koa ny fangatahan’izy ireo ny fiala’ny filohan’ny oniversiten’ny Toamasina. Araka ny nambaran’ i Godcello, filohan’ny mpianatra avy amin’ny faritra Toliara dia hiakatra amin’ny dingana mafanafana ny hetsika raha tsy mbola misy ny marimaritra iraisana amin’ny tompon’andraikitra ka mety hisian’ny fidinana eny an-dalambe.
Momban’ny fahasimbanjavatra nisy tao Barika dimy indray kosa, dia nilaza izy ireo fa tsy fitokonana nataon’izy ireo no nahatonga ny fahasimban-javatra fa vokatry ny hatezeran’ny mpianatra amin’ny fahatapatapahan’ny jiro matetika loatra no nampisy hetsika nandoro ny toerana fipetrapetrahana teo manoloan’ny Espace francophone sy fahasimban’ny fitaratra tao antoerana.
Vokany, hatramin’izao dia, mbola tsy nanomboka ny fisoratana anarana hoan’ireo mpianatra efa tranainy sy ireo vao afaka Bacc tamin’ny taona 2013, raha toaka nokasaina izany tamin’ny faha 11 Aogositra. Ahiana araka izany, fitomboanan’ny fahataran’ny taom-pianarana izay efa nisy tamin’ny taon-dasa.
(74) Prud′Homme RAKOTOSON : 27-08-2014 - 18:30